Karim Benzema Oo Lagu Riday Xukun Maxamed Oo Ku Aadan Kiiska Canjada Galmada
HomeWararka CiyaarahaKarim Benzema oo lagu riday Xukun Maxamed oo ku aadan Kiiska Canjada Galmada
November 24, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Weeraryahanka Muslimka ah ee Karim Benzema ayay maxakmadda The Court of Versailles ku heshay dembi culus oo ah inuu qayb ka qaatay isku-daygii lacagta baadda ah lagaga qaadanayay Mathieu Valbuena oo ay xulka Faransiiska u wada ciyaari jireen, kaas oo cajalad galmo laga duubay sannadkii 2015.
Karim Benzema ayaa laga caydhiyey xulka qaranka Faransiiska markii uu Valbuena la xidhiidhay booliska ee uu u gudbiyey kiiska.
Ragga cajaladda duubay oo asal ahaan kasoo jeeda waddanka Algeria ayay saaxiibbo dhow yihiin Karim Benzema, waxaana markii ay fadeexaddan gacanta ku dhigeen ay la xidhiidheen Karim oo ay la wadaageen arrinta, waxaana uu laacibkani isku dayey inuu dhexdhexaadin ka sameeyo arrintan.
Mathieu Valbuena ayaa uu u sheegay sida wax u jiraan iyo cajaladda laga duubay isagoon is ogeyn, isaga oo la wadaagay dalabka kooxdan budhcadda ah ee cajaladda duubtay oo doonayay in la siiyo lacago baad ah, haddii kalena ay cajaladdan faafin doonaan.
Tababare Didier Deschamps ayaa xulka ka caydhiyey, kumana soo darin tartamadii Euro 2016 iyo Koobkii Adduunka 2018 ee uu dlkiisu ku guuleystay.
The Court of Versailles oo bishii October soo gunaanadday dhegaysiga kiiskan, ayaa maanta shaacisay xukunka, waxaana Benzema oo ku doodayay in aanu wax dembi ah gelin lagu helay inuu qayb ka yahay falkan.
Maxkamadda ayaa ku xukuntay Benzema hal sano oo xadhig ah iyo €75,000 Euro oo Ganaax ah.
Sida ay warbaahintu sheegeen, sharciga Faransiiska ayaa Benzema u ogolaanaya inuu dibedda ku qaato sannadka xadhigga ah ee lagu xukumay, sidoo kalena waxa uu awoodi doonaa inuu kasii mid ahaado xulka qaranka Faransiiska.
Inkasta oo uu laacibkani ka dhiidhiyey arrintan oo uu mar walba ku adkaysanayo inaanu dembi samayn, haddana in aanu jeelka gelin oo uu dibedda ku qaato xukunka, isla markaana uu sii wadan karo ciyaaraha ayaa ah wax weyn, maadaama saaxiibbadiisii kale ee la eedaysnaa ay dhawrkii sannadood ee u dambeeyey ba xidhnaayeen.